Madaxweyne Xasan Sheekh oo Wali ay u cuntami la’dahay Xil kaqaadistii lagu sameeyay Taliyaha Hay’ada Nabad Sugida | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Wali ay u cuntami la’dahay Xil kaqaadistii lagu sameeyay Taliyaha Hay’ada Nabad Sugida
Golaha Wasiirada Xukuumada Soomaaliya ayaa shalay kulan deg deg ah ay yeesheen waxa ay isku raaceen in xilka laga qaado Taliyihii Hay’ada Nabad Sugida Qaranka C/llaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe oo xilkaasi hayay wax ka yar labo bilood.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheek Maxamuud oo la tilmaamay in markiisii hore keenay Sanbaloolshe ayaa kabiyo diidan go’aanka deg dega ah ay golaha Wasiirada xilka ugu qaadeen Agaasimaha Hay’ada Nabad Sugida Qaranka.
Waxaa xalay Xarunta Madaxtooyada Somalia kasocday kulamo kala gooni gooni ah oo looga arinsanayo xil ka qaadista lagu sameeyay Taliyaha Hay’ada Nabad Sugida iyo sidii looga hortagi lahaa in Khilaaf hor leh oo u dhaxeeya Madaxda Dowlada in aysan ka dhalan xil ka qaadistan.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xubno katirsan Golaha Wasiirada iyo Xildhibaano u sheegay in go’aanka xilka looga qaaday Taliyaha Hay’ada Nabad Sugida ay tahay mid ay ku deg degeen golaha Wasiirada Xukuumada Soomaaliya ayna muhiim tahay in dib looga fiirsado.
Wararka aan heleyno ayaa sidoo kale sheegaya in Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha aysan wali arintan si toos ah uga hadlin lana filayo in saacadaha soo aadan ay wada halaan si arintan Khilaafka dhalin karta xal looga gaaro.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaan wali go’aan ka gaarin xil kaqaadista lagu sameeyay Taliyaha Hay’aa Nabad Sugida waxaana laga cabsi qabaa hadii uu Madaxweynaha uu kabiyo diido xil ka qaadista Sanbaloolshe in ay arintan ka dhalato Khilaaf hor leh oo ka dhax dhasha Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha.